Ko kana Kushambadzira Kwako Kuchishanda? | Martech Zone
Ko kana Kushambadzira Kwako Kuchishanda?
Muvhuro, Kukadzi 1, 2010 NeChishanu, Nyamavhuvhu 2, 2013 Matt Nettleton
Semudzidzisi wekutengesa ini ndinoshanda nemakambani mune akasiyana maindasitiri. Uye dzinenge dzose kambani dzandinoshanda nadzo dziri kushandisa yakawanda gore rino kupfuura yekupedzisira pane internet yakanangidzirwa kushambadzira, kusanganisira vezvenhau.
Nehurombo kune mazhinji emakambani aya, yavo yepamhepo kushambadzira iri kutanga kushanda uye ivo vari kuwana mafoni uye maemail kubva kune vanokurudzira vatengi vakawana nekuvatevera pa internet. Asi ivo vari kucherechedza maitiro anoshungurudza, kushambadzira kunogona kuumba zvinotungamira asi zvikwata zvekutengesa zviri kunetseka zvakanyanya kupfuura nakare kose kuvhara.
Tarisiro yeInternet havazi ivo vanhu vawaitengesa kumakore matatu apfuura. Ivo vanhu kubva makore matatu apfuura vakanyatso kuziva zvishoma nezvako ivo vaisaziva chaizvo zvawakatengesa kana kuti wakazvitengesa sei. Vakanga vasingazive zvawakange waita nemazvo kana chero zano nezve izvo iwe zvaungave wakaita zvisina kunaka. Muchokwadi, makore matatu apfuura pawakawana kubvunza chikumbiro chakajairika kubva kune tarisiro yaive 'ndiudze nezve zvaunoita uye nemabatiro aunozviita iwe.? Tariro yanhasi haidi kuziva? Zvaunoita uye uchizviita sei.? Uye izvo zviri kukonzera kukanganiswa kwakanyanya pakati pevatengi nevatengesi izvozvi.
Tariro yanhasi yakufambisa, yakashanyira yako facebook peji, ndokutevera pane twitter uye verenga wongororo nezvako pane yelp. Ivo vanoziva zvaunoita iwe, iwe unozviita sei uye zvese zveasordid ruzivo rwekukanganisa iwe kwawakaita pamusoro pegore rapfuura Vane chikonzero chekutaurirana newe uye hakusi kuti bhurocha riverengerwe kwavari.
Iyo itsva tarisiro haidi kudzidza nezvako-kubva kwauri. Vanoziva zvizhinji zvacho usati wasvika kwavari. Kana kushambadzira kwako kuri kugadzira kutungamira uye rako rekutengesa risingakwanise kuvavhara iro dambudziko kazhinji harisi iro rehunhu hwako. Dambudziko rinowanzo kuve mhando yekutengesa maitiro iwe uri kurega yako yekutengesa timu kuti ishandise.
Kana yako yekutengesa maitiro akagadzirirwa kutaurira vanhu nezvako zvakakanganiswa uye unofanirwa kuchinja.
Ita shuwa kuti rako bhizinesi riine maitiro ehurongwa kuti uwane sei tarisiro yacho yakubata iwe. Kana iwe uchinzwisisa izvo zvinodiwa netarisiro, saka uri kunyatso kuisa bhizinesi rako munzvimbo yekubudirira nevatengi vanhasi.
Tags: bluetooth kushambadziraWordPress
Uchishandisa Masocial Networks eCCRM